नेपाली ब्याटिङको भविष्य मानिएका पाँच खेलाडी | Hamro Khelkud
बेलको अस्वभाविक गतिविधि
ब्राजिली युवा स्टार बार्सिलोनामा अनुबन्धित
चेल्सीलाई तेस्रो स्थानमा अग्रता बढाउने मौका
अन्तर्राष्ट्रिय इस्पोर्ट्स च्यालेन्जमा नेपाललाई थप तीन पदक
‘युरो कप जीवनकै महत्त्वपूर्ण उपाधि’- रोनाल्डो
नेपाली ब्याटिङको भविष्य मानिएका पाँच खेलाडी
शुक्रबार, अषाढ १२, २०७७
भुपेन्द्र जिसी, काठमाडौं
नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रमुख समस्या ब्याटिङ हो । ब्याटिङ पक्ष्य बलियो हुने हो भने विश्व क्रिकेटमा नेपालले धेरै फड्को मार्नेमा दुईमत छैन । तर सिमित खेलाडीमा निर्भर ब्याटिङ इतिहास देखिनै टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ ।
पछिल्लो एक दशक नेपाली ब्याटिङ पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल र शरद भेषावकरमा बढि निर्भर रह्यो । पछिल्लो तीन–चार वर्षयता ब्याटिङमा युवा खेलाडीले सम्भावना र आशा देखाउन थालेका छन् । तर एकरुपता र क्षमता अनुसारको प्रर्दशन गर्न भने संघर्षरत छन् । अर्कोतर्फ युवा खेलाडीमा गैरजिम्मेवार प्रर्दशन पनि बढ्न थालेको देखिन्छ । जुन प्रमुख चिन्ताको विषय हो ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा ओडिआई मान्यता नेपालको सवैभन्दा ठूलो सफलता हो । नेपालले पछिल्लो पाँच वर्षमा युवा खेलाडीलाई धेरै मौका दिएको छ । तर धैर्यता भने देखाउन सकेको छैन । युवा खेलाडी तयार हुन अझैं केहि समय लाग्ने देखिन्छ । युवा खेलाडीलाई खेलको अनुभव जतिधेरै दिन सकिन्छ त्यतिनै नेपालको ब्याटिङमा सुधार हुने देखिन्छ ।
कमजोर ब्याटिङ हुनुमा खेलाडीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । कमजोर घरेलु संरचना, प्रतियोगिता, नेतृत्व लगायतका थुप्रै कुरा त्यो भन्दा अझ बढी जिम्मेवार रहन्छन् । हालसम्म उमेर समुह, सिनिय टोली, घरेलु प्रतियोगिता, प्रर्दशन गर्न सक्ने क्षमता, प्रतिभा र सम्भावनालाई हेर्दा यी पाँच युवा खेलाडी नेपाली ब्याटिङको भविष्य देखिन्छन् ।
५. रित गौतम
यू१९ का कप्तान रित गौतम उमेर समुहमा कीर्तिमानी प्रर्दशन गर्ने ब्याट्सम्यान हुन् । ओपनर ब्याट्सम्यान रित नेपालबाट यू१६ र यू१९ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा शतक प्रहार गर्ने एक्लो खेलाडी हुन् । रितले एसिसी यू१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगितामा सिंगापुरविरुद्ध १ सय १५ रन र २०१७ मा यू१६ इस्टर्न रिजनमा म्यानमारविरुद्ध १ सय ६ रनको अविजित शतकीय इनिङ खेलेका थिए । यसले उनको क्षमता र सम्भावना प्रष्टाउँछ ।
उमेर समुहमा रितले निरन्तर राम्रो प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । दबाबमा धैर्यताका साथ ब्याटिङ गर्ने रित आफ्नो विकेट सहजै गुम्न दिदैनन् । क्रिजमा डटेर बलरको सामना गर्दै दबाबमा पनि रन जोड्न सिपालु छन् । घरेलु क्रिकेट बागमती प्रदेशबाट खेल्ने रित ५० ओभरका खेलमा अझ बढी उपयोगी खेलाडी मानिन्छन् । टि२० फ्रेन्चाइज लिगमा भने रित डेब्युको पर्खाईमा छन् ।
रित सिनियर टोलीको बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिंदै आएका छन् । नेपाली क्रिकेटमा ओपनिङ परम्परा समस्या बन्दै आएको छ । रितले उमेर समुहको लयलाई निरन्तरता दिन सके सिनियर टोलीको ढोका टाढा देखिदैन । रितलाई दीर्घकालिन ओपनरको रुपमा समेत हेरिएको छ । त्यसको लागि रितले आफ्नो प्रर्दशनमा अझ सुधार गर्दै जिम्मेवारका साथ ब्याटिङ गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
४. लोकेश बम
युवा ब्याट्सम्यान लोकेश बमले घरेलु क्रिकेट र उमेर समुहमा राम्रो प्रभाव छोडिसकेका छन् । लोकेशले ओपनर र फिनिसर दुबैमा ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । लोकेश विशेष त टि२० शैलीमा बढी उपयोगी हुने खेलाडी हुन् । विकेटकिपर समेत रहेका लोकेशले उमेर समुह र घरेलु क्रिकेटमा राम्रो सम्भावना देखाई सकेका छन् ।
लोकेशले गत सिजनको पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) मा विराटनगर टाइटन्सबाट फ्रेन्चइज लिगमा डेब्यु गर्दै उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । लोकेशले चितवन राइनोजविरुद्ध ३६ बलमा ६२ रन जोड्दै सबैको मन जितेका थिए । पिपिएलमा विराटनगरलाई फाइनलसम्म पुर्याउन महत्पूर्ण योगदान दिएका लोकेश मोष्ट भ्यालुबल खेलाडी चुनिएका थिए ।
घरेलु प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमको जर्सीमा देखिने लोकेशले शीर्षक्रममा ब्याटिङ गर्दै आएका छन् । लोकेशले माघमा आइसिसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक सिरिजमा राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा परेपनि अन्तिम टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन् । तर आगमी दिनमा सिमियर टोलीमा पर्दै विकेटकिपरको रुपमा लामो यात्रा गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
३. सन्दीप जोरा
सन्दीप जोरा ठूला सट र आक्रामण ब्याटिङ लागि परिचित युवा ब्याट्सम्यान हुन् । जोराले सिनियर टोलीबाट डेब्यु गर्दै विश्व कीर्तिमान रचेका छन् । २०१९ मा युएईविरुद्ध ओडिआई र टि२० आईमा डेब्यु गरेका थिए । डेब्यु टि२० आई खेलमा ५३ रनमा अविजित रहँदै सन्दीप जोराले विश्व कीर्तिमान रचेका थिए । टि२० आईमा सवैभन्दा कम उमेरमा अर्ध शतक प्रहार गर्ने ब्याट्सम्यान बनेका थिए ।
जोरालाई फिनिसरको रुपमा हेरिएको छ । उमेर समुुह र फ्रेन्चाइज लिगमा उत्कृष्ट प्रर्दशनका साथ सिनियर टोलीमा परेका जोरालाई एकरुपता प्रर्दशन गर्न भने आवश्यक देखिन्छ । एपिएफबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने जोराले आफूलाई अझ तयार पार्दै लाने राम्रो समय छ ।
नेपालमा टि२० शैलीका ब्याट्सम्यान नभएको भन्ने गुनासोलाई जोराले गलत सावित गर्ने अनुमान गरिएको छ । उमेर समुह र सिनियर टोलीमा सुरुवाती प्रर्दशनले जोरालाई नेपाली ब्याटिङमा आगमी दिनको भविष्य देखाउँछ ।
२. कुशल मल्ल
युवा अलराउन्डर कुशल मल्लले नेपाली क्रिकेटमा लामो यात्रा गर्ने सम्भावना देखाई सकेका छन् । बायाँ हाते कुशल मल्ल आक्रामक ब्याटिङ र स्पिन बलिङ गर्ने गर्दछन् । उमेर समुह र घरेलु क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रर्दशनका साथ सिनियर टोलीमा स्थान बनाएका कुशलले गतवर्ष टि२० आईमा जिम्बावेविरुद्ध डेब्यु गरेका थिए ।
उक्त त्रिकोणात्मक सिरिजमा अपेक्षा अनुसार प्रर्दशन गर्न नसके पनि कुशलले माघमा आइसिसी विश्वकप लिग–२ मा भने उच्च प्रर्दशन गर्दै आफूलाई प्रमाणित गरेका थिए । अमेरिकाविरुद्ध ओडिआई डेब्यु खेलमा कुशलले ५१ बलमा ४ चौका र ३ छक्का सहित ५० रन बनाउँदै रोहित कुमार पौडेलको ओडिआईमा कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान तोडेका थिए ।
आर्मीबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने कुशलको प्रर्दशन उत्कृष्ट छ । ठूला सट अनि टोलीको आवश्यकता अनुसार खेल्ने कुशल विपक्ष्य ब्याट्सम्यानलाई बलिङमा स्पिन बलमा घुमाउन सक्ने क्षमता पनि राख्दछन् । बायाँ हाते खेलाडी भएको हुँदा रणनितीक हिसाबमा अझ सहज हुने देखिन्छ । १६ वर्षिय कुशलको उमेर बढ्दै जादा प्रर्दशनमा अझ निखार आउने छ ।
कुशल टि२० र ५० ओभर दुबैमा शैली अनुसार उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न सक्ने क्षमता भएका युवा ब्याट्सम्यान हुन् । ५० ओभरको खेलमा मध्यक्रम र टि२० मा ओपनिङ गर्ने गर्दछन् । उनको हालसम्मको प्रर्दशन हेर्दा धेरैले पारस खड्काको सन्न्यास पछि अभाव महसुस हुन नदिने युवा खेलाडी नेपालले पाएको बताउन थालि सकेका छन् ।
१. रोहित कुमार पौडेल
युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेल युवा ब्याट्सम्यानमध्य सर्वाधिक भरपर्दा खेलाडी मानिन्छन् । जिम्मेवारका साथ ब्याटिङ गर्ने रोहितले नेपाललाई ओडिआई मान्यता दिलाउन नामिबियामा २०१८ मा डिभिजन २ र जिम्बावेमा एक दिवसिय विश्वकप छनोटमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । नेपालबाट लिष्ट ए मा २०१८ मा नामिबियाविरुद्ध, ओडिआईमा नेदरल्यान्ड्स र टि२० आईमा २०१९ मा युएईविरुद्ध डेब्यु गरेका थिए ।
रोहितले मध्यक्रममा महत्पूर्ण प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । सन् २०१९ मा युएईविरुद्ध दोस्रो ओडिआई खेलमा ५५ रन जोड्दै भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सचिन तेन्दुलकर र पाकिस्तानका शाहिद अफ्रिदीको कीर्तिमान तोडेका थिए । ओडिआईमा सबैभन्दा कम उमेरमा अर्ध शतक बनाउने कीर्तिमान एक वर्षपछि कुशलले गत माघमा तोडेका थिए ।
जिम्मेवारीपूर्वक ब्याटिङ रोहितको मुख्य विशेषता हो । अर्कोतर्फ आक्रामक र डबल सिंगल दुबै टोलीको आवश्यकता अनुसार खेल्ने गर्दछन् । एक दिवसिय विश्वकप छनोटमा हङकङविरुद्ध उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने क्रममा ८६ बलमा ५ चौका सहित ४८ रनमा अविजित रहँदै नेपाललाई ५ विकेटको जित दिलाएका थिए ।
रोहितको उक्त ब्याटिङबाट प्रभावित हुँदै अफगानिस्तानका कप्तान अस्गर अफगानले आफ्नो ब्याटनै उपहार दिएका थिए । उमेर समुहमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका रोहितलाई मध्यक्रममा नेपाली क्रिकेटको भविष्य र प्रमुख खेलाडीको रुपमा हेरिदै आएको छ ।
मंगलबार, अषाढ ३०, २०७७
रियलबाट गोल गर्ने मेन्डी २१औं खेलाडी
म्यानचेस्टर साउथह्याम्पटनसँग रोकियो
रियल म्याड्रिडले ग्रानडालाई हरायो